gaarsiinta ogeysiska qoyska: Marka sida caadiga micnaheda tahay xirirka oo la waayo, wali waxan u diri karna waraaqo Laan Qayrta Cas (Red Cross) si ay u gaarsiso. (Ogow: ma dirino lacag ama baakado.) hel shahaadada in lagu hayo: dadka soo booqday iskana qoray Gudiga Caalamiga ah ee Laan Qayrt Cas (GCLQ)inta lahayo ama xiranyihin, waxaan awoodi karaynaa inaa siino xaqiijinta oo ah xabsi qaabashada. Adeegana ama caawinteena wa mid qarsoon oo ah bilash.
NA GALA SOO XARIIR Sida ay u shaqeyso
Markaa noo sheegtid meesha u malaynayso xubnaha ka tirsan qoyskaaga inay joogaan, waxan la xiriri doona asxaabteena joogta wadankaas waxana waydiinayna in ay naga cawiyaan Raadinta. Ma balan qadayno guul, lakiin waan kula soo xirirayna sida ugu dhaqsaha badan oo aan helno wax war ah.
HEL QOYSKAYGA KU LUMAY YURUB Suaalo ku saabsan helida qoyskaaga lumay?
Waxaynu kuu tilmaami doonnaa nidaamka lagu helayo qooyskaaga –– iyadoo aynu ka dhigeyno sida ugu dhakhsiyaha badan, ugu wax-qabad fiican iyo ugu taxadar badan. Maxaa yeelay inaad na aamini karto
Laga soo bilaabo dagaalkii koowaad ee adduunka waxaynu dadka ka caawineeynay siday u heli lahaayeen qooyskoodii ay kala lumeen. Waxaynu nahay urur dhex-dhexaad ah oo ka gudbi kara xuduudaha iyo mid xafidi kara macluumaadkaaga shaqsiyadeedSO. Related